ᐉ Amụma nzuzo - 【Ntụnyere】 2022
Ọ bụrụ na ị nọ ebe a ọ bụ n'ihi na ịchọrọ ịmatakwu banyere ọrụ na ikike kwekọrọ na gị dịka onye ọrụ nke weebụsaịtị a https://lacomparacion.comma nke ahụ dị mma. Ọrụ anyi bụ ịgwa gị na nke gị ka a mara gị nke ọma.
N'ime amụma nzuzo a, anyị ga-agwa gị nghọta zuru oke banyere ebumnuche nke webụsaịtị a yana ihe niile metụtara data ị na-enye anyị, yana ọrụ na ikike dabara gị.
Iji malite, ị kwesịrị ịmara na weebụsaịtị a na-agbanwe na ụkpụrụ dị ugbu a n'ihe metụtara nchebe data, nke na-emetụta data nkeonwe ị nyere anyị nkwenye gị gosipụtara na kuki anyị ji eme ka weebụsaịtị a wee rụọ ọrụ nke ọma nwere ike ịzụlite ọrụ ya.
Kpọsị, weebụsaịtị a na-erube isi n'iwu ndị a:
El RGPD (Iwu (EU) 2016/679 nke European Parliament na Council nke Eprel 27, 2016 gbasara nchekwa nke mmadụ.) nke bụ iwu European Union ọhụrụ nke jikọtara ụkpụrụ nke nhazi data nkeonwe na mba EU dị iche iche.
La ỤLỌDỤ (Iwu Organic 15/1999, nke Disemba 13, na Nchekwa data nkeonwe y Iwu Royal 1720/2007, nke Disemba 21, Iwu mmepe nke LOPD) nke na-achịkwa ọgwụgwọ nke data nkeonwe yana ọrụ dịịrị ndị ọrụ maka weebụsaịtị ma ọ bụ blog ga-eburu mgbe ijikwa ozi a.
Onye na-elekọta ya na onye nwe weebụsaịtị a bụ COSMOVIL TECHNOLOGIES, SL (nke a mechara COSMOVIL)
Aha mbu: COSMOMOBILE
Adreesị aha: C / BEGONIAS, 279-280. 816-LIMA
Ihe omume webụsaịtị: nkesa nke ọdịnaya metụtara Ezi ntụziaka, mgbasa ozi ngosi, na nkwanye nke ngwaahịa mmekọ.
A ga-etinye data nke ị nyere anyị nkwenye gị, yana dịka ejiri eguzobe na amụma nzuzo a, na faịlụ akpaghị aka nke edebara aha ya na Agencylọ Ọrụ Spanish maka Nchekwa Data, nke onye na-ahụ maka faịlụ ahụ bụ: COSMOVIL. . Nke a pụtara na data gị dị mma, dịka iwu siri guzobe.
A ga-echekwa ma dezie data nkeonwe ị nyere anyị, mgbe niile na nkwenye gị gosipụtara, maka ebumnuche akọwapụtara ma kọwaa ya n'okpuru Iwu Nzuzo a, ruo oge ị gwara anyị ka anyị hichapụ ha..
Anyị na-agwa gị na enwere ike gbanwee Iwu Nzuzo a n'oge ọ bụla, iji gbanwee ya na iwu ọhụrụ ma ọ bụ mgbanwe na ọrụ anyị, nke a na-ebipụta na weebụ n'oge ọ bụla dị irè. A ga-agwa gị mgbanwe a tupu etinye ya n'ọrụ.
Ị kwesịrị ịma, maka udo nke obi gị, na anyị ga-arịọrịrị nkwenye gị nke ọma iji nakọta data gị na ebumnuche kwekọrọ na nke ọ bụla, nke na-egosi na, ọ bụrụ na ịnye nkwenye ahụ, ị ​​gụọla ma nabata Amụma Nzuzo a..
Oge ị nwetara ma jiri webụsaịtị a, ị ga-ewere ọnọdụ gị dị ka onye ọrụ yana ikike na ọrụ gị kwekọrọ.
Ọ bụrụ na ị gafeela afọ 18, ị nwere ike ịdebanye aha dị ka onye ọrụ na weebụsaịtị a na-enweghị nkwenye mbụ nke ndị mụrụ gị ma ọ bụ ndị nlekọta gị.
Ọ bụrụ n’ị nọ n’afọ iri na atọ, ị ga-achọ nkwenye nke ndị mụrụ gị ma ọ bụ ndị nlekọta gị maka ịhazi data nkeonwe gị.
AKWGKWỌ NA EGO NA-EGO NA-EGO
Dabere n'ụdị ma ọ bụ ngalaba ị nweta, anyị ga-arịọ naanị data dị mkpa maka ebumnuche ndị akọwapụtara n'okpuru. N'oge niile, ị ga-enyerịrị nkwenye gị kwupụtara, mgbe anyị rịọrọ ozi nkeonwe maka ebumnuche ndị a:
Ebumnuche ndị akọwapụtara nke ọma na ibe ọ bụla ma ọ bụ ngalaba ebe ndebanye aha ma ọ bụ ụdị kọntaktị elektrọnik pụtara.
Na mkpokọta, ịzaghachi arịrịọ gị, nkọwa, ajụjụ ma ọ bụ ụdị arịrịọ ọ bụla ị na-arịọ dị ka onye ọrụ site na ụdị kọntaktị ọ bụla anyị tinyere n'aka gị.
Iji gwa gị gbasara ajụjụ, arịrịọ, mmemme, ngwaahịa, ozi na / ma ọ bụ ọrụ; site na e-mail, faksị, Whatsapp, Skype, ekwentị enyere, sms na mms.
Iji zitere gị nkwukọrịta azụmahịa ma ọ bụ nke mgbasa ozi site na kọmputa ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla ọzọ, nke na-enyere nkwukọrịta aka.
Nkwukọrịta ndị a ga-ejikọta ya na ngwaahịa, ọrụ, ozi ma ọ bụ nkwalite anyị, yana ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị anyị nwere ike iche na ọ masịrị gị yana nke ndị mmekọ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ "ndị mmekọ" anyị nwere ike ịnye. nkwekọrịta nkwado ma ọ bụ azụmahịa.
Ọ bụrụ otu a, anyị na-ekwe gị nkwa na ndị ọzọ a agaghị enwe ike ịnweta data nkeonwe gị, ewezuga ihe ndị a gosipụtara n'okpuru, n'ọnọdụ ọ bụla nkwukọrịta a bụ COSMOVIL, dị ka onye nwe webụsaịtị.
Weebụsaịtị a na-egosiputa ngwaahịa mmekọ ndị ọzọ. Kpọtụrụ si AMAZON.
Nke a pụtara na mgbe ịpịrị "Zụta ugbu a" ma ọ bụ ihe yiri ya, a ga-atụgharị gị gaa na peeji nke ebe enyere ngwaahịa ndị a.
N'okwu a, ị kwesịrị ịma na anyị na-enye ma kwado njikọ maka ibe na / ma ọ bụ nyiwe nke ndị ọzọ a ebe a ga-azụta ngwaahịa anyị gosipụtara, iji kwado nchọta na nnweta ha.
Enyochabeghị ibe ndị a metụtara nke ndị ọzọ ma ọ bụ na ha edobela njikwa, ma ọ bụ nkwanye n'aka anyị, yabụ na agbanyeghị COSMOMOBILE A ga-ewere ya dị ka onye na-ahụ maka ọdịnaya nke weebụsaịtị ndị a, maka ọrụ ndị a na-enweta site na iji ha na mpaghara niile, ma ọ bụ maka usoro anabatara gbasara nzuzo nke onye ọrụ, nhazi nke data nkeonwe ha ma ọ bụ ndị ọzọ nwere ike ịmepụta.
Maka ebumnuche ndị a niile, anyị na-akwado ka ị gụọ nke ọma na tupu ọnọdụ niile eji, ịzụta ọnọdụ, amụma nzuzo, ọkwa iwu na / ma ọ bụ nke yiri nke saịtị ndị a jikọtara tupu ịmalite ịmalite ngwaahịa ndị a ma ọ bụ iji webs. .
AKKỌ na eziokwu nke data
Dịka onye ọrụ, ị bụ naanị maka eziokwu na mgbanwe nke data ị zigara COSMOMOBILE, na-ewepụ anyị n'ọrụ ọ bụla na nke a.
N’aka ozo, obu oru gi ka ikwe nkwa ma zaghachi n’uzo obula banyere nkweko, izi ezi na eziokwu nke data enyere, ma i bido ime ha ha nke oma.
Dabere na ihe egosiri na Nzuzo Nzuzo a, ị kwenyere ịnye ozi zuru oke ma zie ezie na kọntaktị ma ọ bụ ndenye aha.
IWUPU OFB SR AND NSIGHTR R NA Ikike Mgbanwe
Dịka onye nwe data nke ị nyere anyị, ị nwere ike iji ikike ịnweta, mezie, ịkagbu na mmegide n'oge ọ bụla, site na iziga anyị ozi-e [email protected]na itinye foto nke akwụkwọ njirimara gị dị ka ezigbo ihe akaebe.
N'otu aka ahụ, ị ​​nwere ike ịwepụ aha n'oge ọ bụla ka ị kwụsị ịnata akwụkwọ akụkọ anyị ma ọ bụ nkwurịta okwu azụmahịa ọ bụla, ozugbo site na otu email ị nwetara ma ọ bụ site na izipu anyị ozi-e [email protected]
Nweta data sitere na ngalaba ato
Iji nye ọrụ dị oke mkpa maka ọrụ na mmepe nke ọrụ nke weebụsaịtị a, anyị na-agwa gị na anyị na-ekerịta data na ndị na-enye ọrụ na-esonụ n'okpuru ọnọdụ nzuzo ha kwekọrọ.
You nwere ike inwe udo nke uche zuru oke na ndị ọzọ a agaghị enwe ike iji ozi a kwuru maka ebumnuche ọ bụla ọzọ nke anaghị achịkwa mmekọrịta anyị na ha site na iwu dị na nchekwa nke data nkeonwe.
A kwadoro weebụsaịtị a https://siteground.es/, iji akara ahia ahia Ọkachamara Bochum SiteGround, nke na-enye ọrụ nnabata ka ị nwee ike ịnweta ma jụọ saịtị anyị. Nwere ike ịkpọtụrụ iwu nzuzo na akụkụ iwu ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ a na njikọ ndị a: https://www.siteground.com/privacy.htm.
Weebụsaịtị anyị na-eji sava mgbasa ozi iji kwado ọdịnaya azụmaahịa ị hụrụ na ibe anyị. Sava mgbasa ozi ndị a na-eji kuki ndị na-enye gị ohere ịmegharị ọdịnaya mgbasa ozi na profaịlụ omume igwe mmadụ nke ndị ọrụ:
Nchịkọta Google bụ ọrụ nyocha weebụ nke Google, Inc., ụlọ ọrụ Delaware nke isi ụlọ ọrụ ya dị na 1600 Amphitheater Parkway, MountainView (California), CA 94043, United States ("Google").
Nchịkọta Google na-eji "kuki", nke bụ faịlụ ederede dị na kọmputa gị, iji nyere aka na weebụsaịtị nyochaa etu ndị ọrụ si eji weebụsaịtị.
Ihe data kuki ahụ na-eme maka ojiji nke weebụsaịtị (gụnyere adreesị IP gị) ga-ebunye Google ozugbo. Google ga-eji ozi a na nnọchite anyị iji debe usoro ị na-eji weebụsaịtị, na-agbakọta akụkọ gbasara ọrụ weebụsaịtị yana ịnye ọrụ ndị ọzọ metụtara ọrụ webụsaịtị na ojiji usentanetị.
Google nwere ike ibunye ndị ọzọ ozi ahụ mgbe iwu chọrọ, maọbụ mgbe ndị ọzọ kwuru ozi ahụ na Google. Google agaghị ejikọta adreesị IP gị na data ọ bụla ọ nwere.
Dịka onye ọrụ, yana igosipụta ikike gị, ịnwere ike ịjụ ọgwụgwọ data ma ọ bụ ozi site na ịjụ ojiji nke kuki site na ịhọrọ nhazi nke ihe nchọgharị gị, n'agbanyeghị, ị kwesịrị ịma na ọ bụrụ na ịmee, ị nwere ike ọ gaghị enwe ike iji arụmọrụ zuru oke nke weebụsaịtị a.
Site na iji weebụsaịtị a, dịka ozi enyere na Nzuzo Nzuzo a, ị nabatara nhazi data nke Google n'ụzọ na ebumnuche ndị egosiri.
Maka ozi ndị ọzọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ iwu nzuzo Google en https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.
Google, dị ka onye na-eweta mmekọ, na-eji kuki eje ozi na webụsaịtị a. Ị nwere ike gbanyụọ ojiji kuki DART site na mgbasa ozi Google yana ịnweta amụma nzuzo nke netwọk ọdịnaya: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.
Google na-eji ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị mmekọ na-enye mgbasa ozi mgbe ị gara na webụsaịtị anyị. Ụlọ ọrụ ndị a nwere ike iji ozi ha nwetara site na nleta gị na nke a na webụsaịtị ndị ọzọ (agụnyeghị aha gị, adreesị, adreesị ozi-e, ma ọ bụ nọmba ekwentị gị) iji jeere gị mgbasa ozi gbasara ngwaahịa na ọrụ ndị nwere ike ịmasị gị.
Site n'iji weebụsaịtị a, ị kwenyere na nhazi nke Google n'usoro na ebumnuche egosipụtara.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ojiji kuki na omume nnakọta ozi yana usoro nnabata ma ọ bụ usoro ịjụ, lee Usoro iwu anyị.
UMU IWU ANYA
Dika onye nwe weebụsaịtị, COSMOMOBILE ejiriwo usoro oru na nhazi niile dị mkpa iji mee ka nchekwa na iguzosi ike n'ezi ihe nke data onwe ya metụtara, yana iji gbochie ọnwụ ya, ngbanwe na / ma ọ bụ ohere site n'aka ndị ọzọ na-enweghị ikike.
Anyị na-echetara gị na, maka ozi ndị ọzọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ peeji nke Legal mara y Iwu kuki.